Isiliva Ingxubevange Wire, Imininingwane Rivet, Imininingwane Ithiphu - ZHJ
Inqubo yokukhiqiza kanye nentuthuko
ubunjiniyela bomshayeli wendiza
I-ZHJ iyi-national torch plan yebhizinisi lobuchwepheshe obusemgqeni wezinto zokuxhumana.
Zama ukwenza amakhasimende ethu ajabule
I-SHZHJ ingakhiqiza kusuka ku-alloy wire wire and strip, ukuze sikwazi ukuthuthukisa futhi silungise inqubo yethu yezinto ezibonakalayo ngokuvumelana nemfuneko yamakhasimende. I-SHZHJ 100% hlola imikhiqizo ngaphambi kwemboni yethu, futhi sinesitifiketi sokuhlola sakho konke ukuthunyelwa.
Ubumbano lobuchwepheshe oluyingqayizivele
Izinsizakalo zethu zisukela ekusetshenzisweni kabusha kwensimbi eyigugu ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokunyathela kuya emihlanganweni ebunjiwe ngepulasitiki. Ngokuvumelana nesiqubulo esithi, "Ubuso obubodwa kumakhasimende", sinciphisa izinhlaka zokuhlinzeka futhi sakhe izixazululo ezisezingeni eliphakeme nezentengiselwano kumakhasimende ethu.
Ukwaziswa kwempahla okuvelele
Lapho insimbi nogesi kuhlangana khona, sinikeza amakhasimende ethu ubuchwepheshe obuyingqayizivele maqondana nezinto zokwakha, indawo eqhutshwa nokuqhutshwa kwawo. Le yindlela izixazululo zokuxhumana ezinokwethenjelwa ezivela enkampanini ye-SHZHJ ezenziwe iminyaka engaphezu kwengu-10.
IShanghai ZHJ Technologies Co., Ltd.
I-Shanghai ZHJ Technologies Co., Ltd. yasungulwa ngonyaka ka-2007, Kusukela ekuqaleni: SHZHJ, GXILA KWEZINTO ZOKUXHUMANA! I-ZHJ iyi-national torch plan yebhizinisi lobuchwepheshe obusemgqeni wezinto zokuxhumana. I-ZHJ izibophezele ekusetshenzisweni kwesayensi nobuchwepheshe besimanje ukuxazulula inkinga ngezinto zokuxhumana, imikhiqizo eyinhloko ye-ZHJ ifaka uchungechunge oluyisithupha lwe-alloy wire wire, i-rivet yokuxhumana, ithiphu yokuxhumana, ukuxhumana kwenkinobho, ukuxhumana noMhlangano kanye neTungsten Contact, Ngolwazi lwethu lwezinsimbi eziyigugu ukucubungula iminyaka engaphezu kwengu-20 nolwazi lwethu olubanzi ekuxhumaneni kukagesi kwamanje. Singabalingani bokuzikhethela ezinkampanini eziningi ezinhlobonhlobo zezimboni futhi cishe kuzo zonke izifunda zemakethe.